५ लाख पचाउन आर्थिक वर्षको अन्तिममा ३ दिने कार्यक्रम – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
२८ श्रावण २०७७, बुधबार २३:१६ English
बारा, २६ असार । असारमा बजेट सक्ने चटारो जताततै देखिएको छ । बाराको महागढीमाई नगरपालिकामा पनि असारे विकास र बजेट खर्च सक्ने मनोविज्ञान देखिएको छ । ‘असार २४ गतेदेखि सुरु गरिएको कार्यक्रम शुक्रबारसम्म चल्ने छ । चेक भुक्तानी असार २५ सम्म मात्रै हुने व्यवस्था छ । अब लेखापालले चेक भुक्तानी कसरी गर्छ ?’ सो क्षेत्रका अगुवाहरुको प्रश्न छ ।
बाराको महागढीमाई न.पा.ले रौतहटको युवा समाज विकास नेपाल नामक संस्थासँग सम्झौता गरी नगर उपप्रमुख तारादेबी कानुले एउटा कार्यक्रम चलाएको पाईएको छ । उपमेयरले आफ्नो नजिकको जिल्लाभन्दा बाहिरको सो संस्थासँग मिलेर आर्थिक वर्ष समाप्त हुने बेलामा जिल्लाका संस्थालाई वाइपास गरी ५ लाखको कार्यक्रम गरिन् । नगर प्रमुख उपेन्द्र यादव तथा उप प्रमुख कानुले बजेट पचाउने दाउमा लागेर यो कार्यक्रम आयोजना गरेको स्थानीय संघ संस्थाहरुको आरोप छ ।
महागढीमाई न.पा. को वडा नम्बर २ मा राखिएको त्यो कार्यक्रम ३ दिनसम्म चल्यो । ५ लाख पचाउने नियतले आर्थिक वर्षको अन्तिममा कार्यक्रम राखिएको स्थानीय युवा मुकेश कुशहवा बताउँछन् ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर बजेट सक्नकै लागि अनावश्यक क्षेत्रमा खर्च हुँदा पनि प्रश्न उठाउन किन नसकेको भन्दै उनले प्रतिपक्षीलाई समेत प्रश्न गरेका छन् । कुशहवाले युवा समाज विकास नेपाल नामक संस्थासँग कमिसन खाएर नगरपालिकाले कार्यक्रम सञ्चालन गरेको दाबी पनि गरेका छन् । नगरपालिकाले असार २४, २५ र २६ गते ३ दिनको लागि नेतृत्व विकास तालिमको आयोजना गरेको छ । यसका लागि ५ लाख बजेट छुट्याएको छ ।
२६ असार २०७७, शुक्रबार १४:४० मा प्रकाशित